बजेट २०७६/७७ : छात्रालाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:२४
आगामी आवको बजेटमा सामृदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न बजेट छुट्याइएको छ । सरकारी विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि सरकारले यो वर्ष आठ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको.....
कृषिमा ५ प्रतिशत वृद्धिदर कायम हुने
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:१७
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/६७ मा कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गत वर्ष २.८ रहेको कृषिको वृद्धिदर रहेकोमा आगामी आर्थिक वषर्मा ५ प्रतिशत.....
सुरु भयो बजेट भाषण
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:०४
बजेट भाषणको ब्रिफकेस बोकी अर्थमन्त्री पुगे संसद
बजेट कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाएको सरकार आगामी वर्ष सफल होला ?
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:५०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बुधबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दै छन् । संघीयता कार्यान्वयनको यो दास्रो बजेट हुने छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको सङ्घीय बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम.....
भौतिक पूर्वाधारमा एक खर्ब ३७ अर्ब बजेट, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गलाई मात्रै ३५ अर्ब प्रस्ताव
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०८:५०
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ एक खर्ब ३७ अर्ब रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ प्रतिशत बढी विनियोजन गर्ने गरी प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए । काठमाडौं–तराई.....
१४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २०:००
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत मोबाइलमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पाँच प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पाँच प्रतिशत भन्सार खारेज गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको.....
नेपाल सूचना प्रविधिमा द्रूतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । इन्टरनेट र स्मार्टफोनले नेपालको सूचना प्रविधिलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । दूरसञ्चार घनत्व बढ्दै जानु र सहज रुपमा स्मार्टफोनको प्रयोग हुन थालेपछि सरकारको डिजिटल नेपालको लक्ष्य पनि सार्थकतातर्फ मोडिएको छ । सबै नेपालीको सूचना प्रविधिमा समान पहुँच हुनु.....
१४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०७:००
पूर्वअर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला अर्थतन्त्र बुझेका पूर्वप्रशासक हुन् । सचिवबाट रिटायर्ड भएपछि सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कोइरालासँग देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, सरकारले लिएको लक्ष्यलगायत विषयमा क्यापिटलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले.....
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । केही वर्षदेखि नेपालमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । अब यसलाई बढाएर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसम्म पु¥याउने सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सरकार आफूले ल्याएको.....